Fitantanana ny toeram-pambolena: fampahalalana ho an'ny fitantanana hertz toeram-pambolena, sns-BALLYA
Famahanana sy fitantanana ombivavy be ronono amin'ny fararano fararano sy ny ririnina
Mamorona toetrandro mikraoba omby mampahazo aina1. Mafana hatrany. Ny fanamafisana ny fihazonana hafanana dia zava-dehibe indrindra amin'ny fitazonana ny fahombiazan'ny famokarana ronono amin'ny ririnin'omby. Ny mari-pana ao anaty omby dia tokony tazonina eo anelanelan'ny 8 ~ 17 ℃. Ny fandriana omby dia tokony hasiana ahitra betsaka kokoa hisorohana ny fifandraisana mivantana eo amin'ny biby fiompy sy ny tany mangatsiaka. Ny fefy ao […]
Fanatsarana ny famahanana omby sy ronono amin'ny fahavaratra
Ny hafanana be amin'ny fahavaratra dia miteraka fihenan'ny fiankinan-doha, fahaketrahana ary famokarana ombivavy be ronono. Ny fanamafisana ny sakafo sy ny fitantanana dia afaka mampihena ny haavon'ny fihenjanana amin'ny hafanana ary mitazona ny vokatra azo avy amin'ny ombivavy be ronono amin'ny fahavaratra. Noho izany, inona no tokony hojerentsika ny fiompiana ombivavy be ronono amin'ny fahavaratra? 1. Temperature, […]
Fanaraha-maso sy fiarovana ny tontolo iainana ny fiompiana ombivavy be ronono
I. Fanaraha-maso ny tontolo iainana ny fiompiana ombivavy be rononoNy tontolo iainana dia manondro ny antony ivelany rehetra mihetsika amin'ny vatan'ny biby, izany hoe ny toe-piainana ivelany rehetra mifandraika amin'ny fiainana sy ny famokarana ombivavy be ronono. Anisan'izany ny mari-pana, hazavana, feo, tany, topografia, habakabaka, rivotra, rano, zavamiaina bitika sns. Ny ombivavy be ronono dia miaina anaty toe-piainana manokana, ny tontolo iainana ivelany […]
Famonoana otrikaretina ilaina amin'ny fiarovana voajanahary ny kijana omby
1. tanjon'ny famonoana otrikaretina manatsara ny fahombiazana sy ny faharetan'ny famonoana ny ahitra sy ny fisorohana ny valanaretina amin'ny alàlan'ny fifehezana ny tontolo iainana. 2. Fitaovana famonoana otrikaretina fiara fitateram-bidy, basy faneriterena avo lenta, sprayer knapsack, sprayer entin'ny tanana, sns. 3. Karazana disinfectants voaomana araka ny […]
Teknika fiompiana sy fitantanan'omby
1. Vatsy famatsianaNy omby mavesatra manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 volana dia eo amin'ny dingana mitombo haingana indrindra. Amin'izao fotoana izao, ny omby tsirairay dia azo omena sakafo 2-2.5 kg mifantoka, silage 10-15 kg ary ahitra 2-2.5 kg isan'andro. Tokony homena ny saina mba hisorohana ny famoahana sakafo tafahoatra sy ny tsy fanjarian-tsakafo tafahoatra, izay miteraka fahaverezan-danja loatra. Omby […]
Vahaolana feno momba ny fanaraha-maso ny lalitra ao amin'ny Ranch
Fepetra fisorohana sy fanaraha-masoⅠ. Fanaraha-maso ny sehatry ny lozisialy toa ny faritra iainana sy ny faritra misy ny birao (faritra misy ny birao, ny toeram-ponenana, ny trano fanatobiana entana, ary ny trano fitehirizana sakafo) Fitaovana fanaraha-maso zava-mahadomelina: Jiro miraikitra, ambain-drivotra na ridao malefaka, jiro manidina avy any ivelany, tranom-pandrika manidina, tranom-baravarana, fampiatoana mpandraharaha, vovoka azo atsofoka ary famolavolana ny bazana. Fomba fisorohana sy fanaraha-maso ny vatana: 1. Mametraha varavarana lamba (ambain malefaka, rivotra […]
Tany fiandrasana omby
Ⅰ. Ny fananganana faritra ihanananana any amin'ny toeram-piompiana ronono dia mizara ho trano fitehirizana entana sy trano heva ary lavaka mangitsokitsoka. 1. Trano fitehirizana entana Ny tahiry akora akora dia afaka mamaly ny fepetra takiana […]
Olana dimy amin'ny teknolojia fitantanana ranomasina
Ratsy ny kalitaon'ny marokoroko. Ny kalitaon'ny mavesatra dia miovaova amin'ny toeram-piompiana mankany amin'ny toeram-piompiana, indrindra fa ny silage. Ny sampana sasany dia mampiasa vokatra silage maivana sy demildew amin'ny fotoana iray aza, izay azo lazaina ho tsy misy dikany. Ny silage sasany dia 20% eo ho eo amin'ny maina ary ampiasaina hatramin'ny 30 kg. Ny famatsiana mangalatra be loatra dia mitarika […]
Soso-kevitra momba ny fitantanana ho an'ny serivisy serivisy
1. Fanatsarana ny fampiononana ny fandriana omby Ny maha-zava-dehibe ny fandriana ho an'ny ombivavy be ronono dia tsy latsa-danja noho ny fiterahana sy ny ronono. Izy io dia mifandraika amin'ny toe-pahasalaman'ny ombivavy be ronono, toy ny areti-tongotra sy ny aretina metabolika. Ohatra, ny aretina amin'ny rantsan-tongotr'akanjo ohatra, rehefa mijaly amin'ny aretin-tongotra ny ombivavy be ronono dia […]
Ny fepetra fitantanana ny toeram-piompiana aorian'ny orana
1. Silage sy feed Reserve environmentMildew dia hitranga amin'ny silage sy ny karazan-tsakafo rehetra rehefa avy mando ny orana mandritra ny adiny telo. Ny kalitaony dia tsy hoe misy fiantraikany amin'ny fihinanana sy ny fahaizan'ny omby ombivavy be ronono ihany koa fa miteraka aretina sy fatiantoka. Noho izany, amin'ny andro migaingaina dia tokony hanamarina ny fepetra rehetra amin'ny tahiry […]
Tondro roa ambin'ny folo momba ny fitantanam-bola
1. Lasibatra amin'ny fidiram-bola omby omby: $ 5,000 isaky ny loha. Ny antony lehibe mahatonga ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny toeram-piompiana dia ny varotra tsy mahasoa. Ny ankamaroan'ny vola miditra amin'ny toeram-piompiana dia avy amin'ny 85% amin'ny fivarotana ronono, izay mifandray mivantana amin'ny vidin'ny ronono. Miorina amin'ny vidiny ankehitriny, ny fidiram-bolan'ny toeram-piompiana dia miankina amin'ny […]
Fitantanana vondrona Ranch
Ny vondrona dia ny fampifantohana ny omby amin'ny toe-batana sy ny fahombiazan'ny famokarana omby iray, izay manana tombony amin'ny fikitihana ny mety ho vokarin'ny omby tsirairay. Azontsika atao ny mizara omby ho zanak'omby, omby manolo ary omby mampinono olon-dehibe arakaraka ny dingana ara-batana samihafa. 0 - 6 volana ny dingana zanak'omby ary ny omby misolo azy dia […]